Beesha caalamka oo caddaadis saartay Muuse Biixi | KEYDMEDIA ONLINE
Beesha caalamka oo caddaadis saartay Muuse Biixi
Muuse Biixi madaxweynaha maamulka gooni isutaaga ku dhawaaqay ee Somaliland ayaa qaaday dhabihii Farmaajo, isagoo diidan inuu qabto doorashada maamulkaas.
HARGEYSA, Somaliland- Beesha caalamka ayaa waqtigan caddaadis ballaaran saareysa Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi, kaas oo doonaya inuu xukunka sii dheereysto.
Madaxweyne Biixi ayaa qaaday dhabihii Farmaajo, sida ay sheegayaan madaxda xisbiyada mucaaridka, isagoo rasaaseeyey dibadbaxyaal dalbanayey inuu doorashada waqtigeeda ku qabto.
Arrimahaas ayaa ka careysiiyey qaar ka mid ah safiirada beesha caalamka ee sida dhaw ula socda xaaladda siyaasadeed ee dalalka gobolka ku yaal.
Madaxdaas ayaa maanta kulan dhanka fogaan arraga ah la yeeshay madaxweyne Biixi, iyagoo u sheegay in aan la aqbali karin dib u dhac kasta oo ku yimaadda doorashada Somaliland.
Biixi ayaa intii uu kulanka socday lagu wargaliyey, in beesha caalamka ay joojin doonto taageerada ay siiso Somaliland, waa haddii doorashada la gacan bidixeeyo, iyadoo ugu danbeyna ay dhinacyadu isku raaceen doorasho xilligeeda ku dhacda.